Sex furniture သုံးချင်တဲ့သူတွေ သတိထား | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး Sex furniture သုံးချင်တဲ့သူတွေ သတိထား
စဉ်းစားကြည့်ရင် ရိုးရှင်းပါတယ်။ လူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံက တစ်ဖြောင့်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျား၊ မ ပေါ်မူတည်ပြီး မို့မောက်နေတဲ့နေရာတွေက ရှိကြပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံကြတဲ့အခါ position တွေကိုလိုက်လို့ ကြွက်သားကို အားပြုရတာတွေရှိတာကို သိကြမှာပါ။ sex chair ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကိုက လိင်ဆက်ဆံဖို့အတွက် အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်ထားတာမို့ sex chair တွေဟာ လူကြိုက်များလာပြီး (အဓိကအားဖြင့်) အချိန်ပိုင်းတည်းခိုလို့ရတဲ့ တည်းခိုခန်း၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်တွေမှာ sex chair ကို ထည့်သွင်းကာ ကြော်ငြာလာကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူဆိုတာမျိုးက အသစ်အဆန်းဆိုရင် စမ်းသပ်ချင်သူချည်းပဲမို့ သင့်အနေနဲ့ sex chair ကို စမ်းသပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း sex chair ရဲ့ အရသာကို သိချင်ဇောနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေကို ဂရုမစိုက်မိတာမျိုး မဖြစ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၁) sex chair က သန့်ရှင်းရဲ့လား?
အိပ်ရာပေါ်မှာ အိပ်ရာခင်းတစ်ထပ်ရှိတတ်ပေမယ့် sex chair ပေါ်မှာ အခင်းထပ်မခင်းကြပါဘူး။ ဒီအခါမှာ လိင်ဆက်ဆံမယ့်စုံတွဲအနေနဲ့ sex chair ရဲ့ သန့်ရှင်းမှုကို ဂရုပြုစေချင်ပါတယ်။ မမြင်နိုင်တဲ့ရောဂါပိုးတွေက အရေပြားကတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်တာကို သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။
(၂) sex chair က ခိုင်မာမှုရှိရဲ့လား?
လေထိုး sex chair တွေကို အသုံးပြုမယ့်သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့အချက်ပါ။ သင်တို့ဟာ sex chair ပေါ်မှာ ထိုင်ရုံထိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ အရှိန်ကို မထိန်းနိုင်ဘဲ ပြုတ်ကျတာမျိုးဖြစ်ရင် အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ်နဲ့ အခြားမလိုလားအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ တက်လာနိုင်ပါတယ်။
(၃) sex chair ကို သုံးတာ စနစ်မှန်ရဲ့လား?
ပြောချင်တာက မျှော်လင့်ချက်ကြီးနဲ့ သွားပြီး sex chair ပေါ်မှာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ အဆင်မပြေခဲ့ရင် အရမ်းကြီး ကြိုးစားမနေသင့်ဘူးဆိုတာပါ။ အခန်းထဲမှာ အိပ်ရာရှိပါတယ်။ ကိုယ်ရော သူပါ နှစ်ဖက်လုံးပျော်မယ့်လမ်းကို ရွေးတာက ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။
ဒီလောက်ဆို sex chair ဆိုတဲ့ အသစ်အဆန်းကို လက်တည့်စမ်းချင်နေတဲ့ မောင်တို့ မယ်တို့အတွက် နည်းမှန် လမ်းမှန်နဲ့ အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။